ဖြတ်တောက်ခြင်းဘုတ်ကိုလုပ်နည်း - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / ဖြတ်တောက်ခြင်းဘုတ်ကိုလုပ်နည်း
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-05-15 မူလ:ဆိုက်ကို
Cအသုံးအနှုန်းဘုတ်အဖွဲ့ကိုလည်းခုတ်ဘုတ်အဖွဲ့ဟုခေါ်သည်။ ထိုအရာiမီးဖိုချောင်ထဲမှာလိုအပ်ချက်တစ်ခု။ ထိုအရာiချက်ပြုတ်သောအခါမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။DIY Multi ကိရိယာများပါဝင်လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်ကိရိယာများ,Drugs နှင့် Cuttersစသည်တို့ကိုစသည်တို့
(1)It ကိုငါရှိသည်nterlaced texture, ခိုင်ခံ့သော texture, ကောင်းသော splint ဖြေရှင်းခြင်း, အဘယ်သူမျှမစကေး - ချွတ်နှင့်မည်သည်မှျBurrs ။
(2)ဟုတ်တယ်mEdium Hardness သို့မဟုတ်အထက်။ ဒါကြောင့်သိပ်မခက်သင့်ဘူးဓားကိုထိခိုက်စေ.
(3)no မနှစ်မြို့ဖွယ်အနံ့ (machilus nanmu)ဖြစ်အနံ့y, ခါးသောသစ်သားအရသာsခါးသောနှင့်အရသာsအချဉ်သူတို့မသင့်တော်ပါ).
ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။ သစ်သားခုတ်ဘုတ်သည်အခြားပစ္စည်းများကိုမထည့်သွင်းဘဲသဘာဝနှင့်အတော်အတန်ပိုမိုလုံခြုံသောကြောင့်ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လာသည်။ သစ်သားခုတ်ဘုတ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများသည်အလွန်အမင်းသိပ်သည်းဆ, ခိုင်မာသည့်ခိုင်မာသည့်နှင့်ခိုင်မာသောအသုံးပြုမှုဖြစ်သည်။
ရွေးချယ်ရန်မလွယ်ကူသည့်သစ်သားပျဉ်ပြားများစွာရှိသည်။ အချို့သစ်သားဖြတ်တောက်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့များcypRသစ်သား) တွင်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောအရာများပါ0င်ပြီးထူးခြားသောအနံ့ရှိသည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုသာညစ်ညမ်းစေပြီးအော့အန်ခြင်း, ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှုနှင့်မူးဝြေခင်းများကိုအလွယ်တကူဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တချို့အလှည့်တချို့ရှိပါတယ်အကေြာင်းဖြတ်ခြင်းထိုကဲ့သို့သော Poplar ကဲ့သို့သောပျဉ်ပြားအကေြာင်းဖြတ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့, အလုံအလောက်ခဲယဉ်းသောနှင့်အက်ကွဲရန်လွယ်ကူကြသည်မဟုတ်.၎င်း၏မျက်နှာပြင်သည်ဓားအမှတ်အသားများထုတ်လုပ်ရန်လွယ်ကူသည်. အကယ်. မျက်နှာပြင်ကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်မသန့်ရှင်းပါက၎င်းသည်ဖုန်ကိုဖုံးကွယ်ရန်လွယ်ကူခြင်း, ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများနှင့်ညစ်ညမ်းသောအစားအစာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သစ်သားဖြတ်တောက်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့များအားလုံးရှုထောင့်အတွက်ကောင်းသောပြည့်စုံအရည်အသွေးနှင့်အတူပါဝင်ဖြတ်တောက်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့များအဖြူ beech သစ်သား, အဖြူအသီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏အစာ,gLE ဒ်လ်တိုလ်လ်စီရီဂြိုဟ်အမျိုးမျိုး, ဘုစပတ်သစ်သားသို့မဟုတ်မိုးမခသစ်သား.
ပထမ ဦး စွာထူးခြားသောပုံစံများကိုထွင်းထုထားသောပုံစံများ, ထွင်းထုထားသောဓားများကိုထွင်းထုထားသောသစ်သားပရိုဂရမ်များ, ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များကိုပြင်ဆင်ပါ။Grinder စက်, Polishing Machine,ရေနံပြီးဆုံးခြင်း။
(2)အဆင့် 2: ဦးဖြတ်တောက်ခြင်းဖိုင်ကို pload ။
(3) အဆင့်3- ဖြတ်တောက်ခြင်းဘုတ်ကိုထပါ။
CCustom Cutting ခ arveအိုကေတပ်မက်လိုချင်သောဒီဇိုင်းနှင့်ပုံစံကို ccording.
(4) အဆင့် 4:Fသံကဲ့သို့သောအဲဒါ။
အကျီင်္ပြီးနောက်အိမ်အတွက်စက်ပြင်စက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်စာချုပ်မညီမညာဖြစ်နေသောချောမွေ့ရန် ed ။ နှင့်အတူပိုလန်အိတ်ဆောင် polishing စက်။ နောက်ဆုံးအပြီးသတ်ingမျက်နှာပြင်ကိုချောမွေ့စေရန်ရေနံကိုအသုံးပြုသည်။ ကွန်ပျူတာလျှင်, လျှင်, လျှင် ပြုလုပ်မဖြစ်uနင်းလိုက်ရိုးရိုးလေးပါလေှျာက်တောင်းမတူညီသောလက်အံ့သြဖွယ်သစ်သားကိရိယာများမည်သည့်ပုံစံကိုမျှ ထွင်း. ထွင်းဖောက်ခြင်းမရှိဘဲသန့်ရှင်း။ ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်ကိုသာသုံးပါ။
အပတ်တိုင်းဆားသို့မဟုတ်ပွက်ပွက်ဆူနေသောရေနှင့်အတူ Soak နှင့်ပိုးသန့်. WAsh နှင့်တစ်ခုချင်းစီကိုပြီးနောက်ခြောက်သွေ့ခြောက်ဝင်ခြင်းအေးဆေးတည်ငြိမ်သောနေရာ၌ဒေါင်လိုက်ထားပါ. Aနေရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုလုံးဝထိတွေ့ခြင်း. လေှျာက်တောင်းနှစ်ဖက်စလုံးတွင်အထူးသဖြင့်သစ်သားခုတ်ဘုတ်အဖွဲ့တွင်ပါရှိသည်။
wenzhouMIbond Machinery Co. , Ltd. သည်အမျိုးမျိုးသောအမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်သည်ပါဝါထွင်းထုကိရိယာများအပါအဝင်ကြိတ်ခွဲစက်, ဘောပင်ကြိတ်,သေးငယ်တဲ့ diy polishing စက်စသဖြင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များသည်ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး0န်ဆောင်မှုကောင်းသည်။ ကြိုဆိုပါတယ်
DIY Multi ကိရိယာများ လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်ကိရိယာများ Drugs နှင့် Cutters အိမ်အတွက်စက်ပြင်စက် အိတ်ဆောင် polishing စက် အိတ်ဆောင် Polishing Grinder ပါဝါထွင်းထုကိရိယာများ ကြိတ်ခွဲစက် လက်ကလောင်ကြိတ်စက် သေးငယ်တဲ့ diy polishing စက်